परिवर्तनका कुरा | Subin Bhattarai
त्यहाँ जानु छैन, किनकि अहिलेसम्म गएको छैन ।
त्यो खानु छैन, किनकि अहिलेसम्म खाएको छैन ।
त्यसो गर्नु छैन, किनकि अहिलेसम्म गरेको छैन ।
यसो भन्ने हामी कति छौँ । हामी कहिल्यै नबोलेको मान्छेसित बोल्न हिच्किचाउँछौँ । नयाँ भन्ने चीज हामीलाई बडो जोखिम लाग्छ । कतै फसाउने हो कि । कतै झुक्क्याउने पो हो कि ! नयाँ बाटो हिँड्दैनौँ । लाग्छ, कतै हराइने पो हो कि !
सिनेमाको निर्देशक र निर्माता नयाँ कलाकारलाई लिएर काम गर्न डराउँछन्, कतै सिनेमालाई नै डुबाउने हो कि ! कुनै प्राइभेट कम्पनीको सिइओलाई सोध्नुस्, नयाँ कर्मचारी लिन किन हिच्किचाउँछन् ?
परिवर्तनको विपक्षमा कोही छैन तर नयाँ कुराको जोखिम लिने पक्षमा हरकोही छैन । हर पुराना चीजहरु कुनै बेला नयाँ थिए । हर नयाँ चीजहरु भोलीका पुराना चीजहरु हुनेछन् । पुरानो र नयाँ चीज भन्ने नै के रहेछ र ? समयको नदीमा मिसिदैँ जाने पानीका खोल्सा खोल्सी न हुन् ।
नयाँ चीजको खोजी नगर्ने हो भने, परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ ? हाम्रा हजुरबुवाहरु पहाड छोडेर बसाइँ नसरेको भए, आज मधेश र काठमाण्डौँ यसरी भरिदैनथियो होला । रोजगारी र अध्ययनका लागि बिदेश जानेहरु पनि हुँदैनथिए होलान् । संसार यति सानो लाग्दै जाने थिएन होला । संसार यतिसाह्रो चलायमान पनि लाग्दैनथियो होला ।
जहाँ गइएको छैन, त्यहीँ जाने हो यहि कारणले कि त्यहाँ अहिलेसम्म गइएको छैन, त्यसैले जानै पर्छ । कमसेकम अनुभवका लागि ।
त्यो खाने हो (आफूलाई उचित लाग्छ भने), यहि कारणले कि त्यो खाइएको छैन, कस्तो होला त्यसको स्वाद । चिन्नलाई पनि खानै पर्छ ।
त्यो गर्नु पर्छ, कस्तो होला त्यो काम गर्दा (यदि आफूलाई त्यो काम ठीक लाग्छ भने), यहि कारणले कि नयाँ काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ । यस्तैले खोज्न सिकाउँछ । ज्ञानको गोरेटोमा कुतुहलको टुकी बालेपछि संसार नै आएर प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यहाँ ।
हामी चट्टान त होइनोँ, जो पहाडको भुँडीमा ढ्यास्स लेउ जमाएर, साह्रो न साह्रो, गहु्रँगो न गह्रुँगो भएर बस्न अभिसप्त छौँ । हामी त्यस्तो चङ्गा होइनौँ जसलाई तलबाट धागो छोडिदिए अगाडी बढ्छौँ र बेरिदिएँ पछाडी सर्छौ ।
‘टे«किङ्ग गर्न जाने हो ?’ एकदिन एउटा मित्रलाई अफर गरेँ ।
‘नाइँ । अहिलेसम्म गाछैन । के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, नजाने,’ उनको ठाडो जवाफ पाएँ ।
अरे यार ! अहिलेसम्म गाछैनौ । त्यसैले जाऊ । अनुभव लिऊ । मन नपरे बरु त्यसपछि नजाऊ । कमसेकम अरुलाई यो त भन्न सक्छौ कि टे«किङ्ग जाँदा कस्तो अनुभव हुन्छ ? कमसेकम भोलीपर्सी, बुढेसकालमा यदि जाने इच्छा भयो तर जान समर्थ भएनौ भने आफैँलाई त जवाफ दिन सक्छौ ।
कतिपय सस्याना कुराहरुमा हामी यहाँ आफूलाई त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, देस परिवर्तन गर्ने ठूल्ठूला कुरा गरिरहेका हुन्छौँ ।
हामीले बाँच्ने एउटा रुटिन बनाएका छौँ । त्यो रुटिन खल्बल्याउन हामी हतपत चाहन्नौँ । हामी एउटा पोखरीसरी स्थिर भएर बसेका छौँ, जहाँ कसैले ढुँगा हानिदिएको रुचाउन्नौँ । हामी तितिरबितर हुन चाहन्नौँ, हामी छरिन चाहन्नौँ, हामी खल्बलिन चाहन्नौँ, लडखराउन चाहन्नौँ, उफ्रिन चाहन्नौँ, थेचारिन चाहन्नौँ ।
तर परिवर्तन भनेकै यिनै हुन् । पहाडको भुँडी नफुटाइ हाम्रा पाइताला टेक्न मिल्ने गोरेटो पनि खनिन्न । कपडा कतै नच्याती, नउधारी लूगापनि सिलाउन मिल्दैन । गोडमेलै नगरी त बारीमा तरकारी पनि फल्दैन ।
परिवर्तन तबसम्म संभव छैन, थाहा पाउँदा पाउँदै कि त्यहाँ केही मिल्नेवाला छैन, त्यही बाटोमा हिँडिरहन्छौँ । परिवर्तन त्यो बेलामात्र संभव हुन्छ जुनबेला हामीभित्र टाँस्सिएका पुराना मान्यताका लेउहरु ताछेर मिल्काउँछौँ र बिचारका नयाँ प्रजातीलाई ठाउँ दिन्छौँ । परिवर्तन एक किसिमको क्रान्ति हो । एउटा रुटिन भत्काउन सक्नुपर्छ । बर्षोदेखिँ ओगटिरहेका अनुत्पादक र कुरुप बिचारहरुलाई मस्ष्तिकबाट मिल्काउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । तब एउटा खाली ठाउँको सिर्जना हुन्छ । हो त्यही खाली ठाउँलाई हामी चाहे अनुसारको आकार दिन सक्छौँ । त्यही खाली ठाउँमा हामी नयाँ बिचार, नयाँ योजना, नयाँ चीजको प्रयोग बिल्कुलै नयाँ ढँगले गर्न सक्छौँ ।
परिवर्तनको चाहना हामी धेरैजसोको मनमा छ । कमी छ त अलिकति आँट, अलिकति आत्मविश्वास, अलिकति अठोट र अलिकति जोखिम लिने साहसमात्र ।
प्रकासित: कान्तिपुर साप्ताहिक
२०७५ जेठ ११ गते
Posted in blog(fp).
Author of four books Kathaki Patra,Summer Love,Saya and Monsoon. Traveller, Explorer, Columnist, Philanthropist,Nature Lover. Have done Masters Degree in Environmental Science and currently involved as Lecturer in Himalayan Whitehouse College, in Nepal.
Copyright © Subin Bhattarai.All Right Reserved